ငါးထောင်တန်ဖုန်းအား သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း တွင်ထွက်ရှိနိုင် | တောရက်စ် (mc)
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအား သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း တွင်ထွက်ရှိနိုင်
တန်ဖိုးနည်း 3G SIM Card နံပါတ်အသေ ငွေကျပ် ငါးထောင်တန်ဖုန်းအား သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း တွင်ထွက်ရှိရန် ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ်နေကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလွင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
“အခုစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ။ မကြာခင်ကာလမှာ လူတိုင်း ဖုန်းကိုင်နိုင်မယ့် အနေအထား ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ယင်းစနစ်သည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်း၍မရကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ကိုင်ပိုင် Network ကိုယ်ပိုင်စနစ်၊ ကိုယ်ပိုင်တာဝါ နှင့် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦး လွင်နိုင်ဦးက ဆိုသည်။ “ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်လို့မရတဲ့စနစ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လုပ်ရမယ့်အနေအထား ဖြစ်တယ်””ဟု ရှင်းပြသည်။
ယခင်က ငါးထောင်တန်ဖုန်း စီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်လာစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ စီမံကိန်း စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၀န်ကြီးဌာနများ အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သို့လည်း တင်ပြသွားရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ သော စကားများအရ ဖြစ်နိုင်မည့် အလားအလာများ ရှိနေခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အားတက်မိကြောင်း ထို့ကြောင့် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ခန့်သည် သေချာသလောက် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဦးလွင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်းတွင် “နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိထိရောက်မည့် လုပ်ငန်းများမှာ အကျိုးထိရောက်မှုရှိအောင် အသုံးပြုခြင်း၊ စီးပွားရေးတွက်ချေ မကိုက်သည့်လုပ် ငန်းများ မလိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းများ လျှော့ချခြင်း၊ အသုံးစရိတ်များ ချွေတာခြင်းတို့ကို တစ်ဖက်က လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်သလို အခြားတစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံပိုင်အခန်းကဏ္ဍ ကိုလျှော့ပြီး ပုဂ္ဂိလိကပိုင် အခန်းကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်တဲ့ ပုဂ္ဂိလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ဒုတိယအဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ထုခွဲရောင်းချခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနဲ့အညီ နိုင် ငံပိုင် အချိုးအစားများနေသော ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ သစ်တောကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ ငွေရေးကြေးကဏ္ဍ များကို ကဏ္ဍတစ် ခုချင်း လေ့လာသုံးသပ်လျက် ပုဂ္ဂိလိကပိုင် အချိုးအစားသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုး ကူးပြောင်းပေးရင်း စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားအောင် အားပေးမြှင့်တင် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုချင်းစီရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် အချိုးအစား ပါဝင်မှုကို ပြန်လည်စိစစ် သုံးသပ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက် နိုင်အောင် ဒုတိယသမ္မတ ဦး ဆောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်အသစ်ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ပေးပြီး ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“လုပ်နိုင်တဲ့သူ လုပ်တာကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပေါ့။ တကယ်လုပ်နိုင်သလား မလုပ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာကို မသိရသေးဘဲနဲ့ တားမြစ်တာကတော့ ဒီမိုကရေစီလက်ထက်မှာတော့ မ ဖြစ်သင့်ဘူး” ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦးကပြောသည်။
Posted by တောရက်စ် (mc) on July 7, 2012 in Mobile.	2 Comments
ဆက်သွယ်ရေးရဲ့စေတနာ says:	August 24, 2012 at 11:09 am	ဟင် ခု သြဂတ်ပြီးတော့မယ် တိုတို ရေ တားတို့ဆောင့်နေရဦးမှာလား နံရံနဲ့
chit ko ko says:	September 3, 2012 at 5:23 pm	ဘယ်တော့လဲ? ဘယ်အချိန်လဲ?